Imboni ye-Movie IV - Izinyoka Endizeni | Martech Zone
Imboni ye-Movie IV - Izinyoka endizeni
NgoLwesihlanu, Agasti 18, 2006 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Izingxenye I, II, III...
Ungasho yini ukuthi ngifuna ukuthi imboni yama-movie iphumelele?
Izinyoka eNdizeni zivulwa namuhla. Okungahle kube yi-movie esabekayo ukwenza umsebenzi omuhle ekukhangiseni nge-inthanethi. Kuwebhusayithi, banikela ngazo zonke izinhlobo zezakhi zegciwane, noma ngabe isicelo esiku-inthanethi esivela ku- I-Varitalk ungasebenzisa ukuthumela umngane ucingo noma i-imeyili evela kuSamuel L. Jackson.
Uxolo Microsoft, ngicabanga ukuthi ngizwa iphunga!
Akusekho Googling… kepha unga Yahoo!